Umkhiqizi Wokupakisha Ukudla Amathokisi webhokisi, Inkampani iTin Box China China
Imikhiqizo yokufaka amaphakethe wokudla
Amathini okupakisha ukudla asiza ukwelula isikhathi sokuphila. Lokho kusho ukuthi ukugcina ukudla bekungekho engcupheni yokudla isikhathi eside. Ukuvezwa ngqo kwe-oxygen kungadala ukubola, ngakho-ke okunye ukudla kudinga ukupakishwa komkhiqizo ongangeni emoyeni. Ukuchitha noma ukuthola umswakama nakho kungaba yinkinga. Awufuni ukuthi ukudla kwakho kukugulise, futhi namathini okupakisha ukudla angalondoloza ama-microbes adala isifo esibangelwa ukudla.
Zonke 19 /Amathoni e-Aluminium 0 /Amabhisikidi namathini Amakhukhi 8 /Amabhakede 0 /Amathini Amakhekhe 0 /Amathangi ekhandlela 1 /Amathini Amakhekhe Nama-Mint 4 /Amabhokisi we-Chocolate Tin 12 /Amathanga kagwayi 0 /Amathofi wekhofi 0 /Ibhokisi Lezimonyo 0 /Amapakeji Okuphakisha Ukudla 12 /Isipho, Amathikithi Okuphromotha 0 /Imikhiqizo Eshisayo 0 /Amabhokisi we-Tin angajwayelekile 0 /Amathiphu we-Lunch 0 /Ipensela, Amathenisi wezinto zokubhala 0 /Ibhokisi le-pet Food Tin 0 /Amabhakede e-PVC (PET) 0 /Ibhokisi Lezinhlaka Eziyindilinga 0 /Amabhokisi we-Round Tin 0 /Amabhokisi Esikwele 0 /Amathiphu Tea 2 /Ibhokisi le-Tin Box 0 /Amathini Amathoyizi, Imali Nemali 0 /Ithreyi, Ibhakede, Coaster, Isiginali ye-Tin 0
Izingqimba ze-Metal Candle Cound ze-Cound Metal Candleging Ideas
I-Rectangular Metal Tea Box Elahlekile Nokhiye Ukupakishwa Kwetiye
I-Round Pipi Elincane Eziqeshini Zesi-Tin Zezinto Zokupakisha Amabhisikidi
Ibhokisi le-Egg Metal Chocolate le-Egg Ye-Chocolate
Ibhokisi Lombhalo Ojwayelekile
Ama-Octagon Akulukhuni Kwesitoreji Sokugcina Iziqukathi Zokupakisha
Ibhokisi Lokwenza Umdwebo Olenziwe Ngokwezifiso Lokwenza Ukupakishwa Kwe-chocolate
I-Custom Design Encane Inhliziyo Ye-Tin Shaped Box for Pacyging
Ama-Custom Design Ephrintiwe We-Tin Eqothulwe Ngokucacile Olahle I-Candy
I-Custom Rectangular Metal Cookie Tin Yethusi elahlekile Ngamabhisikidi
I-Custom Metal Flower Shaped Box Yesipho Ne-Pipi Isitoreji
Iziqukathi ze-Square Metal Tin Zokudla Namaphakethe
Ama-Small Aluminium Tin Containers ama-Candies noma ama-Biscuits
Metal Inhliziyo Shape Tin Can For Valentine Chocolate Packaging
Amathambo Enhliziyo Ezibunjiwe Amakhulu Amatshe Alahlekile Ukupakishwa Kwamakhandlela
Amabhokisi Amancane Wokugcina Amatshe Aphakathi Eshibhile Elahlekile Ukupakishwa Kwezipho
Amakhukhi Amakhulu Wekhekhe Lakho Amabhulukwe Ukupakishwa Kwamabhisikidi
Ibhola Elincane Le-Metal Ball Elingenalutho Lokulondolozela I-chocolate
Ikhasinkomba 5 of 512345
Kungani ukudla kudinga Amathokheni Okuphakisha Ukudla?
Vumela ukuthi ubhekisise imisebenzi esemqoka yamathini okupakisha ukudla: ukuphepha, ukuzivikela, inzuzo, ukusebenza kahle kanye nemininingwane.
1, ukuphepha nokuvikeleka nokuvikelwa
Amathini okufaka ukudla ukusiza ukwandisa isikhathi sokuphila. Lokho kusho ukuthi ukugcina ukudla bekungekho engcupheni yokudla isikhathi eside. Ukuvezwa ngqo kwe-oxygen kungadala ukubola, ngakho-ke okunye ukudla kudinga ukupakishwa komkhiqizo ongangeni emoyeni. Ukuchitha noma ukuthola umswakama nakho kungaba yinkinga. Awufuni ukuthi ukudla kwakho kukugulise, futhi namathini okupakisha ukudla angalondoloza ama-microbes adala isifo esibangelwa ukudla.
Ukupakisha ngokungeziwe kufanele kuvikele ukudla ekushayweni noma ekulimaleni- akekho umuntu ongalokotha athumele amaqanda esikhwameni sephepha.
2, Ukusebenziseka kalula, ukusebenza ngempumelelo, kanye nolwazi
Isayensi yokupakisha ukudla kwethini ibingenza kube lula kuwe ukuthi ubambe okudingayo futhi ube nenani elifanele. Ungakugcina ukudla kwakho, uvule inqwaba, ubone ukuthi yini oyisebenzisayo futhi ususe kahle lapho ingasafanele ukusetshenziswa noma ukusetshenziswa kabusha.
Iziqukathi zethini zokupakisha ukudla nazo zingumthombo wakho oyinhloko wolwazi maqondana nento engaphakathi, njengokubaluleka kokudla okunempilo, izithako ezisebenzayo, kanye nosuku lokuphelelwa isikhathi kakhulu. Ezinye iziqukathi zokudla kukathayela nazo ziletha ukuphepha kokudla namathiphu okuphepha kanye nemiyalelo yokupheka - kwesinye isikhathi ngisho nesidlo seresiphi entsha sha!
Ukupakisha kwethini lokugcina ukudla kusisiza futhi ukulandelela ukudla lapho kunokukhumbula ukudla noma kunenkinga ngomkhiqizo ongahle usigulise. Ngokwe-IFT's International Food Traceability Facility, ukulandelela kuvumela amafemu ukuthi "alandelele imikhiqizo ngokusebenzisa i-supply chain ukuze kuthuthukiswe ukuphepha nokuvikeleka kokudla, kunciphise ubungozi, kugweme ukonakalisa imiphumela yezempilo nenhlalakahle, kanye nokulahleka komnotho ohlelweni lokudla." Ama-barcode amakhodi ahlukile ohlelweni losizo alandelela leyo nto ukusuka kwelinye iphuzu kuye kwelilandelayo, okwenza kube nokwenzeka ukubeka imikhiqizo noma kuphi kanye nohlelo lokudla.
3, Imikhiqizo Esetshenziselwe Ukusetshenziswa kwamathokheni okufaka ukudla
Ukupakisha kweziqukathi zokudla kungenziwa ngeGlasi, insimbi, iphepha noma upulasitiki- ngezikhathi ezithile ku-mix- futhi ezinye izinto zisebenza kangcono ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokudla. Ake sihlole okubalulekile:
Ingilazi. Ingilazi ingumkhiqizo wokuqala wokuphakwa kokudla, ubuya iminyaka engaba ngu-5,000. Inzuzo enkulu ukuthi i-chemistry inert, enikeza umgwaqo odongeni owesabekayo ngokumelene nezibuko kanye namagciwane. Kungenziwa sanat futhi kulula ukuphindaphinda futhi usebenzise kabusha. Izici ezingezinhle ukuthi i-Glass is hefty futhi iyaphuka. Noma ngabe kukuphi konke ukudla okuthola emathinini okulondolozwa kokudla namabhodlela, i-Glass ihlanganisa cishe amaphesenti ayishumi okufakwa kokudla.
Amasimbi. Ukufakwa kweziqukathi zensimbi yensimbi enjenge-aluminium engasindi, insimbi efakwayo, nensimbi engenalo ugesi ngenxa yama-1900s. Ama-Steels ngaphezu kwalokho anezindawo ezinkulu zokuvimbela indawo yokuhlala. Zingalashwa ngokushisa futhi ziboshwe ngenxa yokuqina. I-aluminium engasindi eyenziwe ngqo ku-foil ingenziwa ngqo kumakhandlela akhanyayo, abushelelezi weziphuzo ezithambile. I-Tinplate iphephile futhi ingenziwa isetshenziselwa iziphuzo zekhukhamba, ukudla okucolisisiwe, kanye namathini ka-aerosol (njengo-ukhilimu ophehliwe) Insimbi engenayo i-tin ayinamandla kakhulu futhi futhi ingasetshenziselwa izithako zemigqomo nezigubhu ezinkulu zezinto ezithengiswa ngobuningi.
Iphepha kanye nephepha. Lolu hlobo lokupakisha lubuyela emuva kuma-1600s. Izithintelo zokuhlala zephepha zingavunyelwe, ngakho-ke ukuze zisetshenziswe njengesitsha sokudla, kufanele ziphathwe nge-wax, i-lacquer, noma impahla. Ezinye izimo ziqukethe iphepha lokuklanywa kanye nelesiikhumba, okudingwa ngalo ukulenza lithambeke kakhulu emanzini kanye no-oyela.
Iphakethe lokufaka iphepha lokudla lisetshenziselwa ukuhambisa amabhokisi okudla. Uma ufaka womabili amaphepha kanye nephepha, zibalelwa kumaphesenti angama-35 okufakwa kokudla.
Emakotini ahamba phambili ngokufakwa kokudla. Ukudla kuyalondolozwa, impilo ende (ukufakelwa i-airtight), futhi futhi okusha. Ukubaluleka kokudla okunempilo kuyaqhubeka nokuba njalo. Izitini zezitini zilula futhi ukuzidlulisa, noma phakathi kobubanzi obude.
I-tin yethu ingathwala umkhiqizo ifinyelela izidingo zokuphepha kokuphepha nokuphepha futhi ilungele kakhulu ukugcwaliswa kwe-Broadband.